150W Egwurugwu na-emepụta gas na ọdụ ụgbọ mmiri China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Gas > 150W Egwurugwu na-emepụta gas na ọdụ ụgbọ mmiri
Ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri a nke gas na -ekpuchi ugwu, ugwu nkwụsịtụ na oge nkedo. Ụlọ ọrụ gas anyị na-eji ọkụ ọkụ na- eji ejiji anụ ụlọ na-eme ka ọ dịkwuo ọkụ na-ekpo ọkụ. Bulb Canopy bụ e xcellent maka ngwa ndị dị ka ụgbọ ala gas, ebe a na-adọba ụgbọala na ebe nchekwa. Bbier 150 watt ada ìhè mkpuchi si na ngụcha ájá na obere mmiri mmiri jets. Ike ọkụ a nwere ike ịchekwa ruo 80% na ọkụ eletrik ọkụ. Ihe ndị e ji ekpuchi ihe mkpuchi na- eji arụmọrụ dị elu nke arụmọrụ ọkụ, ọtụtụ voltage ọsọ ọsọ bụ AC100-277V.
150W Ụlọ ụgbọ elu ụgbọ mmiri na-enwu Kpọtụrụ ugbu a
130W Enwere ike ịmalite ikpo ọkụ ụgbọ mmiri Kpọtụrụ ugbu a
60W Gas Station Canopy Light Fixture IP65 Kpọtụrụ ugbu a
ihe nduzi na-eduzi ihe dịka 130w 5000k 16900lm Kpọtụrụ ugbu a
130W Led Canopy Lights 5000K Kpọtụrụ ugbu a
Ebube na-ekpuchi oghere na-ekpo ọkụ 130W Kpọtụrụ ugbu a
Ulo Ogbagba n'igwe na-ekpuchi 150W Kpọtụrụ ugbu a
ada kpuchie ìhè fixtures 150w 5000k 19500lm Kpọtụrụ ugbu a